Egwuregwu Egwuregwu Na-agbapụta Infectonator 3: Apọkalips na More Nje Virus na Zombies | Gam akporosis
O ruola afọ asatọ m dere ihe gbasara Infectonator mbụ na gam akporo, na Anyị nwere nke atọ ebe a na-enye ya ihe niile na Infectonator 3: Apocalypse. Eziokwu bụ na n'oge ya ọ bụ egwuregwu nke "ndị nzuzu" ahụ ị na-etinye na mberede dị ka o mere ọtụtụ puku ndị egwuregwu, yabụ etinyere nkeji nke atọ a yana yana ọtụtụ ndozi.
Nke bu eziokwu idebe nje ebe ahụ ma bute mmadụ ndị ahụ (Wouldnye ga-ekwu nke a ugbu a na nke anyị nwere n'elu), o nwere amara ya ma ọ dị ka ọ nwere ya; ma ọ dịkarịa ala, ha bụ zombies ma ọ bụghị COVID-19, ya mere, anyị na-aga n'ihu na ihe na-adịghị mma nke na-eme ka anyị nwee oge ntụrụndụ. Gaa maka ya.
1 Na-emetụta ụmụ mmadụ na nje zombie
2 Gwa ụmụ mmadụ na Infectonator 3: Apocalypse
3 Jiri gburugburu gị mee ihe bara uru
Na-emetụta ụmụ mmadụ na nje zombie
Egwuregwu Armor wepụtara Izu a Infectonator 3: Apocalypse, akụkụ nke atọ nke saga a nke ahụ na-abịa jupụta n'ụfọdụ akụkọ ọhụụ dịka map ụwa ahụ nke na-enye anyị ohere ịchọta ọrụ ndị mbụ anyị na eziokwu ahụ bụ na "pasta" mba ahụ nwere, ọ ga-esikwu ike ịmechaa ọrụ dị iche iche.
Ma ọ bụ na Infectonator 3: Apocalypse nwere akụkụ nke mmelite nke zombies na njirimara ha dị ezigbo mkpa, ewezuga inwe ike imeghe ụfọdụ zombies pụrụ iche nke ihe niile ga - adị mfe.
Anyị na-agbasaghị ikike iji gbanwee ndụ DNA nje ahụ enwekwu mmetụta na zombies ndị ahụ. Ha ga-enwe ike ịkwaga ngwa ngwa, mee mbibi karịa, nwekwuo ike iguzogide ma mekwuo ụjọ na ụmụ mmadụ ndị ahụ hapụrụ n'ụkwụ n'ihu ha.
Gwa ụmụ mmadụ na Infectonator 3: Apocalypse
Ma nke ahụ bụ ndị ahụ ụmụ mmadụ ga-enwe ike ichebe onwe ha, yabụ na nke a agaghị abụ nnọkọ anyị ga-eche maka ya. Ya mere, anyị ga-ahapụrịrị nje ahụ n'oge ahụ mgbe enwere otu ọnụ nke ọma ma ha anaghị asọpụrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ma eee, obere mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka mma maka nje anyị.
Si n'ikpeazụ na ihe niile ga-abụ nkuzi Infectonator 3: Apocalypse nke mere na anyị ghọtara na n'okwu a, dị ka nke anyị na-ata ahụhụ na ndụ n'ezie, a na-ebufe ya n'etiti mmadụ ...
Na mkpokọta anyị nwere karịa 35 zombies ị kpọghee ekwt, ihe karịrị 200 etoju na ụwa ahụ niile ga-abanye na ọdịnaya dị iche iche. Yabụ, Infectonator 3: Apocalypse nwere ọtụtụ ọdịnaya ka anyị jiri izu ole na ole na-anụ egwuregwu a.
Jiri gburugburu gị mee ihe bara uru
Omume ọzọ nke Infectonator 3: Apocalypse bụ nke ahụ anyị nwere ike iji gburugburu anyị kpọghee ọdịnaya ma ọ bụ mepụta ọgba aghara na ụmụ mmadụ ndị ahụ anyị jidere oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ naanị n'okporo ámá. Ọ bụ ezie na anyị kwesịrị ị atta ntị na nchebe ha, ebe ọ bụ na ọ gaghị adị mfe n'oge ụfọdụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị zombies kwesịrị ekwesị.
Un Egwuregwu anyị nwere na PC na nke ahụ na ekwentị anyị ọ dị ezigbo mma ya na oru ahu na pixel iji meputa ezigbo ihe nlere. Ihe jupụtara na nkọwa, zombies dị iche iche, ụmụ mmadụ nwere ọdịiche dị iche iche, yana mgbawa ndị ahụ gimmicky maka iti mkpu na nsonaazụ ụda.
Infectonator 3: Apocalypse bụ egwuregwu nke "ndị nzuzu" ahụ eboro gị i gaghi akwusi egwu ruo mgbe o gwuchara. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ngwa ngwa na nke ị ga-ewepụta usoro iji zụọ zombies gị agaghị akwụsị, ị nwere egwuregwu maka izu a.
Mee ka ikpe ahụ zombies na nje ndị ahụ gbasaa na mbara ụwa ma weta zombie mgbukpọ ahụ.
Usoro edemede: 6,9
Nko kariri ihe ozo
Nnukwu zombies na zombie dị iche iche
Gburugburu na map ụwa nke na-akpọga anyị n'ọtụtụ ebe
Kpọsa ntakịrị ntakịrị ma site na nke ewepụrụ mgbe 5 sekọnd na X
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Infectonator 3: Apọkalips na-ada ọzọ iji taa ahụhụ ụmụ mmadụ na zombies